Musharaxa Bobi Wine-ka Ugandha oo sheegay in militariga ay weerareen Gurigiisa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musharaxa Bobi Wine-ka Ugandha oo sheegay in militariga ay weerareen Gurigiisa
Siyaasi ayaa u sheegay Al Jazeera in militariga ay hareereeyeen gurigiisa labadii maalmood ee ugu dambeysay.
Bobi Wine waxaa la xiray marar badan eedeymo kala duwan, laakiin waligiis lama xukumin. Wuxuu sheegay in daraasiin katirsan xisbigiisa sidoo kale la xiray [James Akena / Reuters]
Musharaxa madaxweynaha ee mucaaradka Bobi Wine ayaa u sheegay Al Jazeera in militariga ay “la wareegeen” xaruntiisa saacado uun kadib markii uu sheegay in doorashadii khamiistii la musuq maasuqay.
Bobi Wine wuxuu sheegay in milatariga ay hareereeyeen gurigiisa labadii maalmood ee ugu dambeysay ayna “qasaaro gaysatay” Jimcihii markay la wareegeen xaruntiisa.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in codadka laga dhiibtay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Uganda ay ahayd mid aad u xasaasi ah.
Waxay la wareegeen xarunteydii. Waxay xireen ilaaladeyda oo ay si xun u garaaceen, ”Bobi Wine ayaa u sheegay Al Jazeera.
“Telefoonkeyg xaaskeyga iyo dhamaan taleefanada dadka aan la joogo waa la xanibay. Taasi waa xaaladda hadda.
“Milatariga ayaa la wareegay gurigeyga umana jawaabayaan su’aalaheyga. Aniga iyo xaaskeyga cabsi ayaa nagu dhacday. Ma ogin waxa hadda ku dhici doona nolosheena. ”
Bobi Wine ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray saacado uun kadib markii uu yidhi “ikhtiyaar kasta oo sharci ah ayaa miiska saaran” si looga hortago natiijooyinka rasmiga ah.
Saraakiisha militariga ayaa u sheegay Al Jazeera in inkasta oo ay dhacdo ka dhacday hoyga Bobi Wine, aysan ahayn “sida Bobi Wine uu u sharaxayay”.
“Run maahan in dadka ku soo booday [gurigiisa] ay ahaayeen ilaalada amniga laakiin waxay ahaayeen rayid,” ayuu ku xigeenka afhayeenka militariga Deo Akiki u sheegay Al Jazeera.
“Ma ogin inay martidiisa ahaayeen iyo in kale. Laakiin ka amni ahaan, dano ayaan qaadannay, ”ayuu yidhi, isagoo intaas ku daray in hal qof la qabtay halka labada ay ku guuleysteen inay baxsadaan.
Akiki wuxuu sheegay in joogitaanka badan ee ciidamada amaanka ay ahayd “inay ilaaliyaan amnigiisa ayna hubiyaan inuu nabad qabo” maadaama Bobi Wine uu ahaa musharax madaxweyne.
Si kastaba ha noqotee, Bobi Wine wuu diiday sheegashada Akiki, isagoo sheegay inuusan jirin qof rayid ah oo ka booday darbigiisa.
“Qaar ka mid ah askarta ayaa ku soo booday xaruntiisa waxayna garaaceen ilaaladiisa journalists qaar ka mid ah saxafiyiinta halkaas ku sugan ayaa sidoo kale noo sheegaya in gurigiisa ay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan,” ayay tiri Catherine Soi oo ka tirsan Al Jazeera oo warbixin ka soo dira
Jimcihii, guddiga doorashada ee Uganda ayaa sheegay in madaxweynaha muddada dheer ee Yoweri Museveni uu ku hogaaminayo Bobi Wine iyo musharixiinta kale natiijooyinka ku meel gaarka ah oo Bobi Wine uu ku tilmaamay “kaftan”.
Iyadoo la tiriyay boqolkiiba 49.1 codadkii laga dhiibtay codbixinta Khamiista, Museveni wuxuu ku guuleystay 3.9 milyan (62.7 boqolkiiba), halka musharraxa ugu weyn mucaaradka Bobi Wine uu heystay 1.4 milyan cod (29.3 boqolkiiba), guddiga doorashada ayaa yiri wax yar ka dib 5 galabnimo (1400 GMT).
Natiijooyinka soo socda ayaa lagu waday in la sii daayo 9-ka fiidnimo markii bandow dalka oo dhan la dhigay illaa Maarso sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19.
Waxay leedahay natiijooyinka ugu dambeeya waxaa lagu dhawaaqi doonaa galabnimada Sabtida.
Bobi Wine wuxuu sheegay inuu soo bandhigi doono cadeymo muujinaya in warqadaha codbixinta ee horay loo saxay iyo khaladaad kale marka marinka internetka ee Uganda dib loo soo celiyo.
“Waxaan helnay guul raaxo leh,” ayuu yiri Bobi Wine. Waxaan aad ugu kalsoonahay in aan kaligii taliyihii ka adkaaday meel fog.
Wuxuu ka fiirsanayay “mudaaharaadyo nabadeed oo aan rabshad lahayn” oo ka dhashay natiijooyinka lagu dhawaaqay wuxuuna yidhi “ikhtiyaar kasta oo sharci ayaa miiska saaran.”
Musharrixiinta ayaa ka dhiidhin kara natiijooyinka doorashada Maxkamadda Sare.
Internetka ku yaal waddanka ku yaal Bariga Afrika ayaa wali ah mid aan la geli karin ka dib markii dowladda ay jartay habeenkii doorashada.
Talaadadii, Museveni wuxuu ku dhawaaqay joojinta shabakadaha warbaahinta bulshada iyo adeegyada farriimaha oo ay ku jiraan Instagram, Twitter iyo WhatsApp isagoo ka jawaabaya xisaabaadka Facebook ee xiraya saraakiisha dowladda ee shirkadda teknolojiyadda ay sheegtay inay faafineyso macluumaad qaldan.
Bobi Wine waxaa la xiray marar badan eedeymo kala duwan, laakiin waligiis lama xukumin. Waxa uu sheegayaa in sidoo kale la xiray tobanaan xubnood oo ka tirsan xisbigiisa.
Wuxuu olole ku galay isagoo xiran jaakadda xabadda karin, isagoo sheegay in naftiisa looga baqay.
Previous articleUnder siege’: Uganda’s Bobi Wine says military raids home
Next articleWaa kumaa Wasiirkii hore ee Arimaha dibada Dalka Itoobiya ee dhawaantaan la diley seyoum mesfin?
Wartrol is a product that contains salicylic acid and is used to remove warts. Since warts usually occur under the influence of a contagious...
Dibadbaxayaal Sinigaal ah oo dab qabad siiyay dhismooyin dawladeed